Kitra: afaka ny sazin’ny kianjaben’i Mahamasina | NewsMada
Kitra: afaka ny sazin’ny kianjaben’i Mahamasina
Afa-tsento sy tebiteby amin’izay ny mpitia baolina kitra malagasy fa nohafahan’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), ny sazy nahazo ny kianjaben’i Mahamasina, rehefa tsy navela handray lalao iraisam-pirenena, nandritra ny telo volana.
Araka ny fanambaran-dRtoa, Atallah Béatrice, filohan’ny «comité de normalisation», misahana ny baolina kitra malagasy, efa afaka ny sazy nihatra tamin’ny kianjaben’i Mahamasina. Raha tsiahivina, nosazin’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), tsy mahazo hanaovana lalao iraisam-pirenena, ho an’ny ekipam-pirenena, tao anatin’ny telo volana, ny kianjaben’i Mahamasina. Izany sazy izany dia nanomboka ny 27 septambra 2018. Antony, ny fisian’ny mpijery baolina namoy ny ainy, nandritra ny fihaonan’ny Barea de Madagascar sy ny Liona Teranga avy any Sénegal, ny alahady 9 septambra 2018. Nisy mantsy ny tsy fanarahan-dalàna teo amin’ny fampidirana ireo mpijery baolina ka niteraka fifanosehana, niafara tamin’ny fahafatesana olona sy nisian’ny ireo naratra marobe.
Nomarihin’ny filohan’ny «comité de normalisation», efa nisy manampahaizana avy amin’ny Fifa, nijery sy nanao fanadihadiana, ny kianjaben’i Mahamasina, ny voalohandohan’ity taona 2019 ity. Tamin’izany, no nanamarihan’izy ireo fa mila fanamboarana ny vavahady fampidirana sy fivoahan’ny olona. Ankoatra izay, ilaina ihany koa ny fanatsarana ny «gradin» ao amin’io kianjaben’i Mahamasina, io.
Nohamafisin’ireo iraky ny federasiona iraisam-pirenena ireo koa, araka ny tatitra fa mila andraisana fepetra, ny fiarovana ny mpijery noho ny fisian’ireo mpivarotra be loatra manodidina ny Mahamasina, izay tsy mifanaraka amin’ny fepetra iraisam-pirenena, ho an’ny kianja filalaovam-baolina.
Voalaza fa tsy nitsipaka izany tolo-kevitry ny federasiona iraisam-pirenena izany, ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsiahivina fa ankoatra ny tsy fahazoan’ny Barea de Madagascar, nilalao teo Mahamasina, mbola nandoa onitra 10.000 dôlara ihany koa ny mpitantana ny federasiona malagasy, tamin’izany fotoana izany.